DF33Z Smart Watch support SOS distress for kids – Xingxing အသိဉာဏ်နည်းပညာ
အောင်လက်မှတ် ဤအရာကို, ROHS, 3C
Support Language တရုတ်လူမျိုး (traditional, simplified) languages in 52 countries, such as Japan, အင်ဒိုနီးရှား, Malay, အင်္ဂလိပ်စာ, Korean, Denmark, ဂျာမန်, Estonian, etc.
1.ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအားဖြင့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည်.
3.ကျွန်ုပ်တို့တွင် တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိသည်။.
4.Professional ERP သည် စက်ရုံ၏ ကဏ္ဍအားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲသည်။.
5.ကျွန်ုပ်တို့သည် အရိုးသားဆုံး ဝန်ဆောင်မှုသဘောတရားကို အသုံးပြုပါသည်။, ၀ ယ်သူတိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမင်းအတွက်ပြသနာမျိုးစုံကိုဖြေရှင်းဖို့ရိုးသားစွာပူးပေါင်းပါ.
A.Our company was established in 2012, and It isahigh-tech enterprise specializing in the R&D, စမတ်ဝတ်ဆင်နိုင်သော terminal terminal ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း.